Aadan Muriidi – Filimside.net
Hordhac: Waxaa shalay tiyaatarada la saaray filimka Badla oo ah filim qayaano iyo baaritaan ah oo sheeko ahaan laga soo min qaatay filimka caanka ah THE INVISIBLE GUEST. Bollywood markaan waxay u jeesteen inay sameeyaan filim […]
February 18, 2019 Aadan Muriidi
Kusoo dhawaada maqaalkeena todobaad laha ah ee aan kaga hadalno warbixino ku saabsan filimada dhawaan la daawan doono iyo kuwa haatan shaqada laga haayo. John Abraham ayaa soo gaba gabeeyay duubista filimka Batlahouse oo director […]
February 4, 2019 Aadan Muriidi
Kusoo dhawaada maqaalkeena todobaad laha ah ee aan kaga hadalno warbixino ku saabsan filimada dhawaan la daawan doono iyo kuwa haatan shaqada laga haayo Super Star Rajnikantha filimkiisa 166-aad waxaa director ka ah A R Murugadoss wuxuuna qorshaha […]
Maxaa Ka Aragnay Goos Gooska Filimka Thugs Of Hindostan!
September 27, 2018 Aadan Muriidi
Waxaa maanta lasoo bandhigay goos gooska filimka Thugs Of Hindostan Ee Hogaamiyaal ka yihiin Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Katrina Kaif Iyo Fatima Sana Sheikh. TOH goos gooskiisa waxaa lasoo bandhigay subaxdii hore xiliga […]
Maanta Oo Kale Waxaa la Daawaday Filimka Aan Wada Jacel nahay Diljale Iyo Ganacsiga Uu Ka Sameeyay Boxoffice-ka
Maanta oo kale 27 September 1996 waxaa la daawaday filimka Diljale ee hogaamiyaal ka ahaayeen Ajay Devgn, Sonali Bendre iyo Madhoo. Diljale waa filim jacel iyo dagaal isku jiro ah oo soomaalida si weyn ay […]
Is Faham Daro Awgeed Dib U Sameynta Singam 3 Oo Dib U Dhac Ku Yimid
August 22, 2018 Aadan Muriidi
Super Star Sunny Deol oo labadii sano ugu danbaysay ku mashquulsanaa sameynta filimka Pal Pal Dil Ke Paas ee wiilkiisa Karan Deol kusoo caan bixinaayo iyo filimka qoyskiisa isla jilaayaan ee Yamla Pagla Deewana Phirse. […]
BOI: Gold Iyo Satyameva Jayate Maalintooda 5-aad Ganacsigooda Qayaas Ahaan
August 19, 2018 Aadan Muriidi
Filimada Gold Iyo Satyameva Jayate ayaa maanta sameeyeen ganacsi wacan filim walbo wuxuu sameeyay sare u kac ayagoo si wadajir ah ugu faaidaysanaaya axadooda koowaad. Gold Iyo Satyameva Jayate waxay labadooda ka wada siman yihiin in […]
Gold Iyo Satyamev Jayate Ganacsigooda Maalinta Seddaxaad Qayaas Ahaan
August 17, 2018 Aadan Muriidi
Madadaaliyaha koowaad ee Bollywood-ka Super Star Akshay Kumar filimkiisa Gold ayaa helay wadada saxda ee guusha ku gaari lahaa maadaama maanta sare u kac wacan sameeyay. Gold ayaa maanta sameeyay 25-30% sare u kac wuxuuna qayaas […]
Top Openings 2018: Satyemeva Jayate Oo Kaalinta 6-aad Ka Galay Filimada Ugu Bilaabasho Wanaagsan Sanadkaan
August 15, 2018 Aadan Muriidi
Filimka Satyemeva Jayate ayaa kaalinta 6-aad ka galay filimada ugu wanaagsan sanadkaan waliba wuxuu ku dhawaaday SJ inuu booska kala baxo filimka Padmaavat oo si isku mid ah ku wada furmay subaxdii hore. Taas micnaheedu […]
Top Openings 2018: Gold Oo 3-aad Ka Galay Filimada Ugu Bilaabasho Wanaagsan sanadkaan
Gold ayaa kaalinta 3-aad ka galay filimada ugu bilaabasho wanaagsan sanadkaan Gold ayaa maalintii koowaad subaxdii ku furmay 50-55% wuxuuna sidaas ku noqday filimka 3-aad ee ugu bilaabasho wanaagsan sanadkaan. Super Star Akshay Kumar filimkiisa […]